Canada - Canada na 'tipping point' maka esemokwu ala Wet'suwet'en - TELES RELAY
Alberta, Canada - Ngagharị iwe, ihe mgbochi na ihe ndị ọzọ ụmụ amaala ha na ndị ha na ha jikọrọ aka na - abata Canada emeela ka obodo ahụ pụta “n’oge a na-eme mkpọtụ”.
Nke a bụ ka Chief Wilton Littlechild, onye bụbu onye isi nke Eziokwu na Ndozigharị nke Canada (TRC) nke Canada.
"Nke a bụ okwu echere maka Canada ma gosipụta mkpa ọ dị maka imezigharị ka ọ bido ebe ọ na-enweghị, wee gaa n'ihu ebe ọ nwere," Littlechild gwara Al Jazeera site na ekwentị.
Ruo ọtụtụ izu, ndị ngagharị iwe agbaala n'okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọ mmiri, na-agbagha akụkụ nke ngalaba njem obodo, iji guzobere n'ịkwado ndị na-agbachitere ala Wet'suwet'en, bụ ndị na-alụ ọgụ ịkwụsị ngbanye ọkpọkọ na mpaghara ala ọdịnala ha north British Columbia (BC). Ndị isi Wet'suwet'en, ndị na-achịkwa ala ha, kwuru na a nyochaghị ha nke ọma na ọkpọkọ GasLink 670km (416 mile). Companylọ ọrụ ahụ kwuru na ya na ndị otu 20 nke ọgbakọ a họpụtara ahọpụtara ka ha kwekọrịtara. N’ọnwa Disemba, ụlọ ikpe kacha elu BC nyere Coastal GasLink iwu ka ọ gaa n’ihu na-arụ ọrụ na pipeline.
Ịgbaso njide nke Wet'suwet'en ala gbachitere ihe dị ka izu abụọ gara aga, esemokwu ebulitere ịdị n'otu na -emeziwanye ọnụ n'ofe ala, na ọtụtụ ndị na-akpọ Prime Minista Justin Trudeau idozi nsogbu ahụ.
N'aka nke ọzọ, ndị isi ọchịchị obodo katọrọ Trudeau maka ịhapụ ịkwado ndị na-eme ngagharị iwe ahụ, na-ezo aka na mmetụta mgbochi akụ na ụba.
"Ihe mgbochi ndị a na-ezighi ezi na-anwa imechi Canada, na enwere ndị mmadụ na-efunahụ ọrụ ha, ndị na-acha anụnụ anụnụ, ndị na-enweghị nsogbu, nchekwa nchekwa propane na-agba ọsọ na ụlọ ọgwụ dị na Quebec," Alberta Premier Jason Kenney kwuru.
“Zuru ezu,” ka ọ gbakwụnyere na nnọkọ akụkọ na Wednesde na Edmonton.
Ndị na - akwado ndị isi ketara eketa Wet'suwet'en Nation na-emechi ụzọ okporo ụzọ dị ka akụkụ nke ngagharị iwe megide pipeline GasLink nke British Columbia, na St Lambert, Quebec [Christinne Muschi / Reuters]
Onye ndu ndị mgbagha na Canada Andrew Scheer rịọrọ ka Trudeau wepu "ndị na-eme ihe ike" na-ejide mba ahụ "njide akụ na ụba".
Canadian National Railway (CN) na Via Rail Canada kwuputara ụgwọ ọrụ nwa oge nke ihe ruru mmadụ 1,500 n'izu a n'ihi ngosipụta a. Dabere na Dennis Darby, onye isi oche nke ndị na-emepụta Canada na ndị na-ebubata ya na ndị na-ebubata ihe ruru $ 321m ($ 425 nde Canadian) nke ngwaahịa kwa ụbọchị.
Ka ọ dị ugbu a, Quebec Premier Francois Legault dọrọ Trudeau aka na ntị ka o nye ndị ngagharị iwe iwepu ihe mgbochi ha ma nye ohere inweta ọgwụ, propane na ihe ndị ọzọ dị mkpa site na iji ụgbọ oloko laghachi na mpaghara. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, Legault kwuru na ọ dịla njikere iwere okwu a n'aka ya site na ịgụnye enyemaka nke ndị uwe ojii mpaghara.
Legault gwara ndị nta akụkọ na ụlọ omebe iwu Quebec n'isi izu a. "Achọghị m ịlaghachi azụ n'oge ọgba aghara nke ndị ọrụ ugbo. Achọghị m ịchọpụta na m enweghị ụgbọ elu n'ihi na anyị enweghị mmanụ. A ga-akụtu ihe mgbochi ndị a ụbọchị na-abịanụ. O nweghị ihe a ga-ewepụpụrụ ugbu a… ee, anyị kwesịrị ịkwanyere ndị amaala anyị ùgwù, gee ha ntị, mana anyị kwesịrị ige ndị Canada ntị, na Quebecers. "
Onye na - akwado ndị isi ihe nketa Wet'suwet'en Nation nọ n'oche ụzọ ụgbọ oloko dịka akụkụ nke ngagharị iwe megide pipeline GasLink nke British Columbia, na Edmonton, Alberta [Codie McLachlan / Reuters]
Trudeau kwuru na ịkpọ ndị uwe ojii ịme ihe agaghị enyere ha aka.
"Anyị kwesịrị idozi ya ọ bụghị naanị maka taa na echi, kama maka izu na ọnwa na-abịa. Thezọ onye ndu ndị mmegide [Onye Ọchịchị] na-atụ aro agaghị eme ka ọrụ na nkwụsi ike dịrị ndị Canada n'ọdịnihu. Anyi lekwasịrị anya iji dozie ya n'udo, ”Trudeau siri na nzuko omeiwu nke ugwu Wenezde kwuru.
Ọ gbakwunyere na, agbanyeghị na anabataghị mgbochi ahụ.
Ọ gwara ndị nta akụkọ, "gọọmentị a na-agbasi mbọ ike iji dozie ọnọdụ a. "Anyị maara na ndị mmadụ na-eche ụkọ, ha na-eche nsogbu, ha na-eche ihu ihu - nke ahụ anaghị anabata. "
Kemgbe ọ malitere ọrụ n’afọ 2015, Trudeau ekwuola na ihe gọọmentị kachasị mkpa bụ idozi ya na First Nations.
Ma esemokwu ndị kachasị ọhụrụ na-eme ka ọ pụta ìhè na ụzọ idozigharị adịlarị nsogbu.
Ihe nwere ike ịga otu n’ime ọtụtụ ụzọ, Little son gwara Al Jazeera.
"Ọ bụrụ na ọ ga - aga n'ihu n'ụzọ na - adịghị mma, ọ ga - emebi ezi mbọ niile nke imeziwanye," Littlechild kwuru. "Nke a bụ oge ọhụụ ma anyị nwere ike ịdabere na United Nations, Nkwekọrịta, TRC Oku na-eme. Onwere ihe achoputara n’ule ndia bu ihe enyemaka. "
A na-edetu ihe ịrịba ama na nsu ka ndị na - akwado ndị isi Nkịtị Wet'suwet'en Nation ji ihe mgbochi okporo ụzọ dị ka akụkụ nke ngagharị iwe megide pipeline GasLink nke British Columbia, na St Lambert, Quebec [Christinne Muschi / Reuters]
Sylvia McAdam, onye ọka iwu Cree na prọfesọ na Mahadum Windsor, kwetara.
McAdam, otu onye guzobere Idle No More, kwuru, sị, mmegharị amụrụ na 2012 na nzaghachi ụgwọ ndị omeiwu nke yiri ọbụbụeze amaala na nchekwa gburugburu.
"Echere m na taa anyị erutela ebe ndị agbụrụ agbụrụ agbụrụ gwụsịrị ike, ike gwụrụ ha na nchịkwa ọchịchị, ike gwụrụ ha maka ichebe na ịgbachitere (ikike na ala)," ọ gwara Al Jazeera.
McAdam kwuru na Canada kwesịrị ịtụle ihe o mere n'oge gara aga ma kwụọ ụgwọ o ji ya na nke mbụ.
O kwuru, "Atụrụ m na steeti colonial a na-akpọ Canada ga-eme mgbanwe ndị bụ isi etu ha si arụ ọrụ na withmụ Amaala," "Nke ahụ pụtara na anyị na-eweghachi ala anyị, na-asọpụrụ nkwekọrịta ndị ahụ, ọ dịghị nke ala ndị ahụ ced ma ọ bụ nyefee. Ọ bụrụ na nke ahụ emeghị, [Kanada] ga-ama ọgbọ nke ọzọ [ụmụ ụmụ m] ikpe ịda ogbenye, ị ga-ahapụkwa ndị na-eto eto iwe iwe. "
Ndị otu mba mbụ nke Tyendinaga Mohawk Territory na-elekọta ebe a na-esote ụzọ na-agafe n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, na-akwado ndị otu Wet'suwet'en Nation ndị na-anwa ịkwụsị ọkpọkọ nke ọkpọkọ British Coastia Coastal GasLink [Chris Helgren / Reuters]
Ka ọ dị ugbu a, amabeghị ma ọnọdụ ahụ ga-akawanye njọ.
Ndị uwe ojii Federal si Royal Canadian Mounted Police (RCMP) zigaara ndị isi eketa akwụkwọ ozi izu a, na-ekwu na ha ga-ewepụpụ na ngalaba Wet'suwet'en n'okporo ụzọ pippe ma ọ bụrụ na edobere ụzọ ọrụ. Agbanyeghị, ndị isi ketara eketa jụrụ onyinye ahụ, na-ekwu na RCMP ka na-ahụ maka mpaghara ahụ. Chiefsfọdụ ndị isi nketa ga-aga Tyendinaga Mohawk Territory na Fraịde, a na-atụ anya na ha ga-enwe nnọkọ akụkọ.
Dabere na Littlechild, ọnọdụ ahụ ga - ewe "uche ndọrọ ndọrọ ọchịchị" n'akụkụ niile iji kwekọrịta.
"Nke a nwere ike ịbụ ohere iji dozie nsogbu ndị a ọnụ ma mụta ibi n'udo ọnụ na-aga n'ihu. "
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.aljazeera.com/news/2020/02/canada-tipping-point-wet-land-dispute-200221164735909.html
Mkpụrụ osisi Bekee na Artichoke Pasta Recipe - NYT nri - New York Times